अचम्मकाे हाेटल जहाँ पुग्न ६० हजार सिँढी चढ्नु पर्ने | Makalukhabar.com
अचम्मकाे हाेटल जहाँ पुग्न ६० हजार सिँढी चढ्नु पर्ने
बैशाख २ । आफ्ना ग्राहकलाई नौलो अनुभुति दिलाउनका लागि दुनियामा अनेक खालका होटेल खुलेका छन् । यस्तै एउटा अनौठो होटल चीनमा छ । चीनको येल्लो माउन्टेनमा अवस्थित उक्त होटलमा पुग्नका लागि ६० हजार सिँढी चढ्नु पर्दछ ।
उक्त चारतारे होटलको नाम जेड स्क्रिन होटल हो । पहाडमा १८३० मिटर उचाईमा रहेको उक्त होटलबाट हंगशन पर्वतीय श्रृंखलाको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा १५ सय वर्षभन्दा पनि पूराना सल्लाका रुखहरु छन् ।
होटलसम्म पुग्नका लागि ६० हजार सिँढीको विकल्प पनि छ । त्यो हो केबुल कार । होटल निकै भव्य तथा सुविधा सम्पन्न छ । त्यहाँ स्पा तथा स्विमिंग पुल समेत छन् ।
होटलमा जानका लागि सिँढी चढ्न नसक्ने मानिसलाई भरियाले बोकेर पूराउने सुविधा पनि छ । पहाडमा खोपेर बनाइएको बाटो र त्यसमा रहेका सिँढीहरु चढ्दा निकै डरको अनुभुति पनि हुनसक्छ । होटलमा ६५ वटा सुविधासम्पन्न कोठाहरु रहेका छन् । एजेन्सी
‘बालुवाटार बेच्नेले सिंहदरबार बेच्लान्, हाेशियार !’
एउटा यस्ताे भाले जसले बासेकाे कारण अदालतमा मुद्दा झेल्नु परेपछी
असार १०,फ्रान्स । सेन्ट पिएरे दे अनोरेन त्यस्तो ग्रामिण टापु हो, जहाँ सहरीयाहरु प्राय बिदा मनाउन पुग्छन् । यसै क्रममा एक सहरीया जोडी कोरिन फसोको छिमेकमै पुगेको थियो बिदा मनाउन । शान्तपूर्ण वातावरणको आनन्द लिन यहाँ पुगेको त्यो जोडीलाई एका बिहानै ‘डिस्टर्ब’ गर्यो त्यही भालेले । उनीहरु रिस... जारी राख्नुहोस...
शंखेकिराका कारण २६ रेल प्रभावित भएपछी
असार १०, जापान। जापानका मानिसहरुका लागि एक एक सेकेन्ड महत्वपूर्ण छ । कुनै पनि सेवामा ढिलाई हुँदा कम्पनीले सार्वजनिक रुपमा तत्काल माफी माग्नुपर्छ । यसपटक दक्षिणी जापानमा बिजुली आपूर्ती ठप्प हुँदा करिब २६ रेलको आवतजावत प्रभावित भएको छ । जसका कारण करिब १२ हजार यात्री तनावमा परेका छन् । रेलवेले अनुसन्ध... जारी राख्नुहोस...
अचम्मकाे रूख जसकाे सम्पर्कमा मानिसकाे मृत्यु हुने
असार ९। प्रकृतिको हरियाली सबैलाई प्यारो लाग्छ। अझ गर्मीमा हरियो रुखको छहारीमा बस्न कसलाई मन लाग्दैन र ? तर केही रुख यति खतरनाक हुन्छन्, जसको छेउछाउमा पुग्नु पनि मानिसका लागि मृत्युको कारण बन्न सक्छ । सामान्य रुख झै देखिने ‘सरबेरा ओडोलम’ ज्यानमारा रुख मानिन्छ । हेर्दा सुन्दर लाग्ने यो रु... जारी राख्नुहोस...
६ सय वर्ष पुरानो पुल, जुन घाँसबाट बन्छ
असार ८, पेरु । पेरुको कुस्को इलाकामा अपुरिमेक नदीमा एउटा यस्तो पुल छ, जसलाई हरेक वर्ष मर्मत गरिन्छ । साथै घाँसबाट बनेको डोरीले पुरानो पुलको ठाउँमा एक नयाँ पुल निर्माण गरिन्छ । यसलाई इन्का रोप ब्रिज भनिन्छ । किनकी सबैभन्दा पहिले यसलाई इन्का साम्राज्यको समयमा पुल बनाउन यो प्रविधि प्रयोग गरिन्थ्यो ।... जारी राख्नुहोस...
लागुऔषध कारोबारीले २४६ प्याकेट कोकेन निलेपछि...
असार ८ । लागुऔषध कोकेनका २४६ वटा प्याकेट निलेका एकजना जापानी यात्रीको मेक्सिको सिटीबाट उडेको विमानमै मृत्यु भएको छ। उक्त विमान जापानको नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नुपर्ने थियो। तर ती यात्रीको मस्तिष्कमा समस्या देखिन थालेपछि मेक्सिकोको सनोरा राज्यमा विमानको आपत्‌कालीन अवतरण गराउ... जारी राख्नुहोस...
एजेन्सी । पूर्वीय दर्शनमा जीवनमा सँधै गोप्य राख्नु पर्ने केही कुराको चर्चा गरिएको छ । कतिपय कुराहरु हामीले अरुलाई सेयर नगर्नु नै राम्रो हुन्छ । हामीले यहा जीवनमा सदैव गोप्य राख्नुपर्ने केही कुराहरुको बारेमा चर्चा गरेका छौं । १. रातिक्रिडा जीवनमा यौन सम्बन्धको विषयमा कसैलाई पनि नभन्नुस् । कुनै स्त्... जारी राख्नुहोस...
अस्ट्रेलियामा एउटा रूख अकास्मात रुनुकाे यस्ताे छ रहस्य
असार ६, अस्ट्रेलिया । एउटा रूख अकास्मात रुन थालेपछि अस्ट्रेलियाको पर्थमा सबै चकित भएका छन् । गएको शुक्रबार पर्थको बाहिरी भागमा पर्ने एक स्थानमा एउटा रूखबाट निरन्तर पानी तप्किन थालेपछि सबै जना चकित भएका हुन् । युकालिप्टस अर्थात् मसलाको रूखबाट यसरी पानी तप्किँदै गरेको धेरैले देखेपछि ईश्वरको चमत्कार ठ... जारी राख्नुहोस...
अचम्म दाह्री पाल्दा हुन्छ यती धेरै स्वास्थ्यलाई फाईदा
असार ५, काठमाडौं । स्कूल कलेज पढ्ने टिनएजर हुन् वा अफिसमा काम गर्ने कर्मचारी, धेरैजसो पुरुषहरुमा अचेल दाह्री पाल्ने क्रेज बढिरहेको देखिन्छ । अधिकांश पुरुष आफूलाई स्टाइलिस देखाउनका लागि शौखको रुपमा दाह्री पाल्ने गर्दछन् तर दाह्रीका छुट्टै फाइदा पनि छन् जो थाहा पाउन सकिरहेका छैनन् । हालै गरिएको एक अ... जारी राख्नुहोस...
जति पढ्यो उति बढ्छ आयु !
‘पढीलेखी के काम, हलो जोती खाए माम’ । नेपालीमा चर्चित यो भनाइले पढाइलाई भन्दा पनि श्रमलाई बढी महत्त्व दिने गर्छ । भिन्न सन्दर्भ र परिवेशमा यो भनाइको आफ्नै महत्त्व छ, होलान् । तर कम्तिमा पढ्ने बानीले चाहिँ मानिसको लागि गर्ने थुप्रै फाइदाहरुमध्ये एउटा रमाइलो फाइदा पनि हुँदो रहेछः त्यो हो&nd... जारी राख्नुहोस...
आजकाल स–सानो कुरामा सम्बन्ध टुट्ने स्थितीमा पुग्छ । सम्बन्धविच्छेदका विभिन्न किस्सा त तपाईंले सुन्नुभएकै होला तर मध्यप्रदेशको पारिवारिक अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको एउटा यस्तो मामला सार्वजनिक भएको छ जसले तपाईंलाई आश्चर्यमा पार्नेछ । सम्बन्धविच्छेदको निवेदनमा श्रीमतीले श्रीमानको रहन–सहन चित्... जारी राख्नुहोस...